Koodhadhka ugu wanaagsan ee Z390 ee Ciyaaraha - 2020 (Faallooyinka) - Liisaska
Koodhadhka ugu wanaagsan ee Z390 ee Ciyaaraha - 2020 (Faallooyinka)
Motherboard-yada Z390 waxay dunida ku qabsadeen duufaan leh qaab-ciyaareedkii ugu fiicnaa. Waxay u kortay inay noqdaan hooyooyin caan ah oo la aqoonsan yahay oo taageera jiilka ugu dambeeya ee processor-rada. Soo bandhigida Intel ee loo yaqaan 'z390 chipset' ayaa si dhakhso leh ugu faafay sida dabka duurka oo kale, iyo soosaarayaasha heerka koowaad waxay go'aansadeen inay ka qayb galaan tartanka.
Xitaa magacyo waaweyn sida MSI, Asus, iyo Gigabyte waxay doorteen inay kuu keenaan xulashooyinka qiimaha leh. Si kastaba ha noqotee, tani waxay keentay kaladuwanaansho kaladuwan oo xulashooyin ah. Maanta, waxaad ku haysataa suuqyo aad u tiro badan oo z390 ah suuqa, waxayna noqon kartaa mid si isku mid ah u cabsi badan in laga fiirsado waxa ugu fiican iyaga
Si kastaba ha noqotee, tan tan ugu fiican Z390dib u eegistu waxay kuu keeneysaa xulashada ugu sareysa gees kasta oo adduunka ah. Uma baahnid inaad eegto meel kasta maadaama dib-u-eegiddani ay ku siin doonto macluumaad kooban oo khuseeya sabuurad kasta. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira hagaha iibsadaha, iyo qaar ka mid ah su'aalaha inta badan la isweydiiyo si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto go'aan aqoon leh.
Sanduuqa TVga ee ugufiican Android - Hagaha Iibsashada
Kiniiniyada ugu Fiican Daawashada Filimada
Aan hoos ugu dhigno baacsiga oo aan ku bilowno:
Kuwa ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Z390 Motherboard' (2020) oo leh Dib u eegis:
Xuquuqda kore ee liiska, waxaad ku leedahay xulasho ku qasab ah MSI maadaama midkani uu taageerayo 8-dii ugu dambeysaythiyo 9thsoosaarayaasha jiilka ee Intel. Waxaad kuheli kartaa Pentium Gold iyo Celeron xulashooyin badan oo processor-rada ah. Waa DDR4, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon xawaaraha iyo waxqabadka Z390.
Waxaad heleysaa xusuus si aad uga dulqaadato taageerada ilaa 4.4 Gigahertz, taas oo ka dhigeysa xulasho wax qabad sare. Waxay la timaaddaa dhammaan dekedda USB ee ugu dambeeyay iyo taageerada Gen2. Heatsink-dheereedka la dheereeyay ayaa ah mid ku habboon in lagu bixiyo kala-baxa kuleylka wanaagsan ee Motherboard-ka.
Waxay leedahay kor u qaadista asaasiga ah ee saxeexa MSI si loo hubiyo in si ku habboon loogu gudbiyo qaybta wax soo saarka. Turbo M.2 waxay xaqiijineysaa illaa 32 Gbps ee wareejinta xogta ee SSD. Qaadashada saxeexa MSI, waxay leedahay HD iyo modules dhawaaq gooni u ah si loo bixiyo tayo aan fiicnayn oo ilaa 8 kanaal ah.
Si kastaba ha noqotee, maahan sida saxda ah 'ugu-fiican-fasalka' maxaa yeelay waa heer-gelitaan soo-gal ah oo leh qaabab isku dhafan oo heerkoodu sarreeyo. Sidaa darteed, waa xulasho ku habboon miisaaniyadda oo ku filan kuwa doonaya inay tijaabiyaan Motherboard-ka Z390.
Tayada dhismaha ee MSI
Waxay ku fiican tahay overclocking ku caashaqay
Ilaa hadda wadayaasha
Taageerada software cajiib ah
Ma ahan xulasho saaxiibtinimo. Waxay kaa rabtaa inaad khibrad u leedahay dejinta
Buugga isticmaalaha ma cadda
2. MSI MPG Z390 Ciyaarta Edge
Haddii aad jeceshahay hore ee Motherboard-ka laakiin aad dooneysay xoogaa horumar ah iyo in ka badan oo ah ‘saxiixa MSI,’ markaa kan ayaa hubaal inuu ku habboon yahay biilka. Motherboard-kan wuxuu la yimaadaa wax kasta oo kii hore lahaa, sida 8thgen 9thtaageerada processor-ka, iyo dekedda ugu dambeysa ee idaacadaha lagu duubo.
Si kastaba ha noqotee, waxay heshaa laba dekedood oo M.2 ah iyo USB badan 3.1 dekedo Gen2 ah si aad u buuxiso shuruudahaaga isku xirnaanta. Dabcan, maxay ahaan laheyd Motherboard-ka iyada oo aan la helin bilicsanaanta MSI? Halkan waxaad ku leedahay nalalka qarsoodiga ah ee saxeexyada leh xakamaynta RGB si loo hubiyo khibrad dhammaystiran oo la beddeli karo.
Intaas waxaa sii dheer, ku-xirnaanta Bluetooth iyo qaybaha isku-xirnaanta wifi waxay kuu keenayaan xawaare isku-xirnaan aan fiicnayn iyo awood. Waxaa jira casriyeyn ku jirta qaybaha maqalka ee go'doonka ah si loo bixiyo tayada sareysa ee waxqabadka codka. Kabaha kululeeyaha la dheereeyey iyo isku xirayaasha birta ee gaashaaman ayaa kuu keenaya adkeysi waxqabad.
Waxaad si fudud ugu dari kartaa GPU-yo badan, waxaad kaheleysaa awood cajiib ah xusuusta, iyo iskuday. Waxay leedahay dhismo adag oo adag iyo BIOS saaxiibtinimo leh. Haddii aad tahay qof jeceyl badan, kani ma niyad jabi doono. In kasta oo Motherboard-ka kor lagu siiyay uusan ku habboonayn qof walba dookhiisa, kani wuxuu hubaal ku qancinayaa dhammaan baahiyahaaga Z390.
Xulashooyinka kala duwan ee qaybaha, RAM-yada, iyo processor-ku-habboonaynta
La-dhisay LAN iyo BlueTooth waxay ka shaqeeyaan sanduuqa
Qancinaya filashada waxqabadka ee Motherboard-yada Z390
Waxyar oo culus oo ballaadhan ayaa loo dhisayaa looxyada Z390
Waxay umuuqataa inay ilaalinayso heerkul ka sareeya kan kale ee Motherboard-yada
GIGABYTE ayaa ku garaaceysa darajo iyada oo ay tahay mid cajiib ah oo lagu daro joornaalada Z390. Halkan waxaad kuheleysaa isku dheelitirnaan waxqabad, xawaare, kuleyl ah, iyo qiime hal xul ah. Waxay ku timid taageero 8-dii ugu dambeysaythiyo processor 9gen, oo ay ku jiraan i3 ilaa i9, Celeron, iyo Pentium. Naqshadeynta gaarka ah ee VRM waxay awood u siineysaa inay taageerto sideed-processor-ka udubdhexaadka ah.
Iyada oo ah madaxa + 8 + 4 madaxa, waxaad kuheleysaa noocyo kaladuwan oo dhameystiran oo kombuyutarkaaga lamid ah. Ka sii muhiimsan, waxay la timaadaa Smart Fan 5 kontaroolada iyo iswaafajinta si loo buuxiyo shuruudaha qaboojinta. Sidaa darteed, waad ka dhigi kartaa mid aan hagaagsaneyn oo loo yaqaan 'motherboard' si ay u bixiso waxqabad sare oo joogto ah.
Biinanka dhaqameed waxaa lagu beddelay biinano adag si loo hubiyo adkeysiga qaabeynta isticmaalaha. Uma baahnid inaad ka walwasho jir ahaan inaad u dhaawacdo Motherboard-ka. Waa hub aad u adkeysi badan oo sii adkeysanaya taas. Wifi-ku wuxuu la yimaadaa taageerada LAN, oo leh M.2 saxanka, waxaad leedahay CPU aad u yaqaan.
Dabcan, Motherboard-kan wuxuu dhabar jab ku yahay sharraxaadda qaybaha kala duwan si loo hubiyo waxqabadka. Ma filan kartid wax badan marka la eego rafcaanka muuqaalka ah ee moodalka. Haddii aadan dan ka lahayn taas, midkani waa xulasho dhammaystiran hab kastoo aad u fiirsato.
Waa fududahay in la isticmaalo iyo xulasho aad u saaxiibtinimo leh
Dhisid waara oo leh biinano adag si looga hortago waxyeellada
Dejinta toosan iyo u shaqeynta hoyga Z390
BIOS maahan isticmaale-saaxiibtinimo waxaana laga yaabaa inay qaadato waqti in lagu qabsado
Ma jiro wax wifi ah oo la dhisay ama deked bandhig ah oo ku xirnaanta kale
Mar labaad, waxaad ku helaysaa nooc kale oo la cusbooneysiiyay oo ah doorashadii hore ee liiska. Midkani wuxuu ku yimaadaa naqshad 12 + 2 VRM halkii caadiga ahayd 10 + 2. Waxay xaqiijineysaa iswaafajinta guud iyo waxqabadka aan fiicnayn ee ka yimaada geedi socodka, maadaama aad ka guran karto 5 GHz waxqabadka haddii aad si sax ah u hesho tilmaamaha.
Midkani wuxuu la yimaadaa wifi la dhisay oo leh ku dhowaad 2 Gbps oo ah awoodda xawaaraha si loo buuxiyo shuruudaha isku xirnaanta. Waxay la timid taageerada caadiga ah ee taageereyaasha Smart 5 oo lagu daray cusub ee RGB LEDs. Waa sax! Waxaad heleysaa is-dhexgal hal abuur leh oo nalalka LED-ka ah oo si aad u wanaagsan ula shaqeeya nidaamka monochrome-ka hooyada.
Waxay leedahay laba ilaaliye kuleyliyaha M.2 waxayna taageertaa kanaal laba geesood ah oo loogu talagalay xusuusta DDR4. Haddii aad isku darto dhammaan astaamaha, u-habeynta, baahinta, iyo taageerada korantada, Motherboard-kan waxaa shaki la'aan ah in lala wareegayo qiimahiisa aadka u tartamaya.
Motherboard-culus oo culus
Qaybaha heerka-sare ee bixinta danab ugu fiican
Meelo badan oo USB ah iyo dekedo kale si ay ugu dhigmaan shuruudaha isku xirnaanta
Dareemayaal heerkulka badan for kormeerka heerkulka dhamaystiran
BIOS maahan mid caqli gal ah waxayna qaadataa waqti in lala qabsado
Ma laha wax khaldan LED ama koronto CMOS
5. ASUS Ra'iisul Z390-A Motherboard
Haddii fiidiyowyada iyo sawirada ay yihiin shuruudahaaga, maxaa u dhigmi kara ASUS waana Prime Z390 liiska? Mucjisadan quruxda badan waxay kuu keeneysaa wax kasta oo Z390 ay bixin karto. Waxaad kuheli kartaa isku xirnaanta xawaaraha sare leh PCI 3.0 express iyo xawaaraha 2.0. M.2 oo taageeraya ilaa 32 Gbps oo xawaare ah ayaa iskudarsamaya ugu fiican fasalka USB 3.1 iyo Nooca C si ay uhelaan dhinacyo badan.
Naqshadaynta Optimem II oo leh dhisme qabow ayaa ka dhigaysa mid heerkulkeedu aad u adkaysto maadaama ay nidaamiso heerkulka si hufan. Sidaa darteed, waxaad kor u qaadi kartaa saacadda, taas oo ka sarreysa wixii hore ee hore. Dabcan, sidee ku iloobi kartaa saxiixa shan-geesood ah oo is-hagaajinta Asus lagu yaqaan.
Qalabka ku-habboonaanta AI wuxuu hubiyaa xakamaynta caqliga ee xad-dhaafka, xakamaynta kuleylka, iyo waxqabadka otomaatiga ah. Asus Prime Z390 wuxuu kaloo kuu keenayaa waxqabadka ugu fiican fasalka adoo iskaashi la leh RealTek oo loogu talagalay modules dhawaaqa. Intaas maahan! Waxaad helaysaa muuqaalo aad u wanaagsan iyo naqshad qurux badan oo loogu talagalay rafcaan casri ah oo leh nalalka LED-ka.
Heer dhexe oo aan caadi aheyn Z390
Xulashada ugufiican ee tafatirka fiidiyowga iyo qaabeynta qaabeynta qaabdhismeedka
Qiimaha sare ee lacagta
Waxaa ka buuxa astaamo ku kalifaya
BIOS iyo Darawallada waxay u baahan yihiin cusbooneysiin gacanta ah
Cusboonaysiinta ayaa ka dhigi karta wax yar oo adag in la isticmaalo BIOS iyo Darawallada
6. ASUS Ra'iisul Z390-P
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxaa jira Asus Prime? Hagaag, kani waxaa loogu talagalay isticmaaleyaasha dhamaadka sare ee maalgashiga heerka gelitaanka. Midkani waa xulasho aad ufiican dhismayaasha kombuyuutarka ee jecel inay astaamiyaan cutubkooda. Haddii aad tahay qof bilow ah ama dhise nidaam dhexdhexaad ah, tani waa xulasho aad u habboon.
Sida naqshaddii hore, waxaad heleysaa ikhtiyaarrada isku xirnaanta degdegga ah ee degdegga ah iyo xoojinta xusuusta cajiibka ah ee bixiya isugeyn heer sare ah. Waxaad heleysaa wareejinta xogta aan fiicnayn iyo naqshad jilicsan oo ah saxiixa Asus. Muuqaallada iyo sharraxaadda ayaa halkan lagu soo koobay iyadoo leh waxqabad muuqda.
Si kastaba ha noqotee, maadaama ay tahay miisaaniyad-saaxiibtinimo, waxay ku qaadataa xoogaa dharbaaxo tirada dekedaha waaxyaha kala duwan. Intooda badani waa heerka afar. Waa Motherboard heer ATX ah oo leh is-dhexgal aan xasillooneyn oo lix wilal ah, oo laga yaabo inay ku degto dadka isticmaala qaarkood. Guud ahaan, waa qiimo sare oo lacag ah.
Qiimo sare lacag iyo waxqabad sare
Gabi ahaanba waa loo habeyn karaa isticmaalayaasha
Doorasho aad u fiican oo loogu talagalay dhisayaasha kombuyuutarka
Buuxiyo shuruudaha ciyaarta iyo sawirada
Taageerada 8thiyo 9thqalabka gen, oo ay ku jiraan i-processors
Qaybaha dhiska waxay qaadaan wax yar oo socod ah oo leh iskudhaf caag ah
Waxaa jira dekedo xadidan iyo isku xirnaanta oo xaddidi kara dhismaha buuxa
Haddii aad raadineyso ikhtiyaarro miisaaniyad ka fiican oo ka badan noocyada caymiska, ASRock waxay leedahay xulasho aad u fiican oo loogu talagalay boorarka. Midkani wuxuu leeyahay gundhig aasaasi ah oo leh ku dhowaad dhammaan astaamaha Motherboard-ka caadiga ah ee Z390. Waxaad helaysaa isku xirnaan isku mid ah, xirmid xad dhaaf ah, iyo wixii aan ahayn. Si kastaba ha noqotee, waad kasban kartaa faa'iidooyinka buuxa ee dhamaadka sare ee Z390 ay ku siin karto.
Si ka duwan boodhadhka Motherboard-ka badankood, waxaa jira muuqaal soo jiidasho leh. Waxay leedahay taageero xasuus labalaab ah oo gaareysa 64 GB, taasna waxay ka dhigeysaa mid taagan. Waxay leedahay waxqabad aad u miisaaman waxayna leedahay xulashooyin qaboojin oo xadidan. Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato casriyaynta Z390 adiga oo aan ka fiirsanin wax badan oo ciyaar iyo muuqaal ah, kan ayaa shaqada qaban doona.
Dabcan, haddii aad leedahay waxqabad aan caadi aheyn iyo shuruudaha ciyaarta, kuuma niyad jabi doono. Guud ahaan, waxaa loogu talagalay kuwa adeegsada kombuyuutarka ee jecel inay la socdaan illaa imika laakiin aan haysan isticmaalka PC-ga ee soo noqnoqda. Dhanka kale, haddii aad tahay xirfadle shaqeeya, waa xulasho la awoodi karo.
Xulasho heer-gal ah oo heer sare ah
64 Gbps ee taageerada xusuusta
Miisaaniyad-saaxiibtinimo iyo qiimo lacag
Aad ugu fiican isticmaalayaasha PC-ga mararka qaarkood
Ku ilaalin lahaa shuruudaha xirfadeed
Ma bixinayso waxtarka buuxa ee Motherboard-ka Z390
Waxay ku habboon tahay mararka qaarkood ciyaaraha iyo shuruudaha sawirada
8. EVGA Z390 Madoow
Ku dhowaad dhammaan kaararka kor lagu siiyay ayaa ah kuwo galaya heer dhex-dhexaad ah oo leh fursado dhammaad sare leh. Si kastaba ha noqotee, midkani waa mid si dhab ah ugu fiican-fasalka hooyada ku jirta liiska. Waxay kuu keeneysaa astaamo buuxa iyo waxqabad heer sare ah. Haddii aad runtii rabto inaad la kulanto Z390 sharafteeda, waa inaad midkan heshaa.
Isla markiiba fiidmeerka, waxaad leedahay isku xira koronto 24-pin leh 8-pin oo loogu talagalay awoodda CPU. Waxaad heleysaa 4.6Ghz cajiib ah oo xad dhaaf ah oo lagu xiray 2DIMM xasuusta laba-channel. Waxaa jira noocyo badan oo ah nooca A, Nooca C, iyo hareeraha 7 USB 3.1 Gen 2 Ports si loo buuxiyo shuruudaha isku xirnaanta casriga ah.
Waad dhexgeli kartaa ilaa lix SATA. Waxaa jira 2 M.2 iyo taageerada xasuusta ilaa 32 GBSP. Waxaa ku jira Bluetooth, wifi, iyo taageero maqal oo aan lala tartami karin. Waxay leedahay Laydh iyo dhammaystiran oo si fiican u dhammaystiran oo si fiican ula shaqeeya laydhadhka iyo wixii aan ahayn. Waxaad taageero buuxda kahelaysaa LED-yada, bandhigyada, iyo qalabka kale ee kormeerayaasha si aad uhesho tirakoobyada processor-ka oo dhameystiran.
Waxay la socotaa 17 weji oo VRM dijital ah iyo iswaafajinta xusuusta Intel Optane. Waxaad sidoo kale heleysaa 5.1 kanaal HD maqal ah + EVGA NU Audio. Waxaa jira wifi-kii ugu dambeeyay ee laba-wifi ah iyo kii ugu dambeeyay ee Bluetooth 5.0, waxaadna helaysaa waxyaabo badan oo dahabi ah oo dahabi ah oo lagu xoojiyay boosaska PCIe. Waxa jira ikhtiyaarro khaldan oo aamin ah, sida badhanka SafeBoot si loo hubiyo dib-u-dejintii ugu dambeysay ee la yaqaan.
Si kooban loo dhigo, waxay kuu keeneysaa ku dhowaad wax kasta oo aaladda Motherboard-ka Z390 ay ku siin karto iswaafajin buuxda. Dabcan, waa isku qiimo, sidoo kale.
Isku xirnaanta oo dhameystiran iyo astaamo kala duwan
Aad loo hagaajin karo
Waxay fulisaa shuruudaha kormeerka
Nalalka loo yaqaan 'LEDs' ee loogu talagalay rafcaanka bilicsanaanta, iyo moodal jilicsan
Habka ugu-fasalka wanaagsan Z390
Qiimaha ayaa aad uga badan kan kale ee Motherboard-yada Z390
Way ku dhici kartaa nidaamka haddii aad siideyso waa awood buuxda
Tilmaamaha Iibsadaha ee Motherboard-ka ugu Wanaagsan ee Z390:
Dabcan, suuqa si joogto ah ayuu isu beddelayaa, waxaana jiri doona waqti uu Z390 noqon doono tiknoolajiyad hore. Haddii aad ka fekereyso inaad iibsato, waxaad filan kartaa inay ku dhowaad shan sano ka hor tahay inaad dhacsan tahay.
Waxaa jira fursado badan oo kafiican durba, laakiin waxay ku kacayaan qiimo isku mid ah. Sidaa darteed, haddii aad ka fiirsaneyso aaladda loo yaqaan 'Z390 motherboard', waxaa fiican inaad maskaxda ku hayso qodobbada soo socda:
1. Xulasho Diyaar U Ah
Qaybta ugu muhiimsan ee aaladda 'Z390 motherboard' ayaa ah u-habeyn ku habboon adeegsadaha. Sidaa darteed, waa inaad hubisaa inaad ogtahay waxaad ku samaynayso kombuyuutarka. Kama filan kartid xirfadlayaal kale inay kaa caawiyaan hawsha. Waa xulasho aad u fiican kuwa baranaya inay dhisaan ama doonaya inay maalgashadaan processor-kooda si tartiib tartiib ah.
2. Tixgeli Xirashada Xusuusta iyo Xusuusta
Waa inaad tixgelisaa taageerada xusuusta iyo xad-dhaafka xad-dhaafka ah haddii aad rabto aaladda Z390 inay sii socoto muddo dheer. Ma ahan inuu ka gaabiyo dhinacyadaan, ama waxaad ku dambeyn doontaa Motherboard gaboobay oo shaqada qaban lahaa.
3. Waxqabadka Qabow
Taageerada taageerayaashu waa lama huraan. Motherboard-yada qaar waxay taageeraan laba taageere sida ugu fiican. Waxaad u baahan tahay ugu yaraan seddex ilaa shan taageere si aad u ilaaliso heerkulka ugu fiican, gaar ahaan howlaha culus ee culus. Sidoo kale, overclocking waxay qaadan doontaa lacag.
4. Xulashada Isku xirnaanta
Kama jabin kartid helitaanka USB-ga maadaama ay noqotay sharuud lama huraan ah haddii aad rabto inaad ku xirto qalab badan. Haddii aad leedahay nidaam cod, kumbuyuutarrada, xakamaynta ciyaarta, ama wax kale, USB waa muhiim. Sidoo kale, SSD ama SATA waa muhiim, sidoo kale.
Ha iloobin wifi iyo isku xirnaanta Bluetooth xilliga casriga casriga ah ee maanta kaa doonaya inaad haysato isku xirnaanta ugu dambeysa ee xawaaraha sare leh.
5. Dhinacyada Jirka
CPU-yada casriga ahi waxay kaa rabaan inaad yeelato dhisme is haysta iyo naqshad jilicsan. Ma iska indho tiri kartid dhinacyadan, gaar ahaan haddii aad rabto wax isku dhafan shuruudaha qurxinta ee hadda jira. Waa suurtagal in la iska indhatiro LED-ka iyo bilicsanaanta kale haddii aad leedahay gole daboolaya hooyadaada.
Badbaadinta habboon iyo qaybaha fasalka sare ayaa muhiim u ah Motherboard-ka muddada dheer socon doona. Maaddaama aad ku xidhan tahay inaad heshid codsiyo, ciyaaro, iyo barnaamijyo u baahan waxqabad sarreeya, ma khatar gelin kartid kulayl ama ka badbadis ka kooban waxyaabo jaban.
Intooda badan Motherboard-yada Z390 waxay noqon doonaan xulasho miisaaniyadeed oo saaxiibtinimo iyo adeegsi shaqsiyeed. Kuwani waxay ku fiican yihiin unugyada kombuyuutarka guriga ee aad ku raaxeysan karto ciyaaraha mararka qaarkood. Haddii aad rabto inaad ku raaxeysato ciyaaraha laga bilaabo 2015 illaa 2020, waxay ku siin doontaa waxqabadka ugu fiican.
Taas ka sokow, waxay si fiican ugu shaqeysaa naqshadeynta iyo tifaftireyaasha fiidiyowga. Guud ahaan, kuwani waa xulashada saxda ah ee waxqabadka caadiga ah. Kuwani waxay ku fiican yihiin isticmaalka 9-kathprocessor-ka gen ee Intel.
Su'aasha Badiyaa La Weydiiyo:
1Q. Ma Z390 Worth Gadashada?
Sanadaha:Haddii aad maareyn kartid miisaaniyadda oo aad maalgashan karto heer sare oo ah Z390, shaki la'aan waa u qalantaa maalgashiga. Z390 wuxuu la yimaadaa waxyaabo badan oo heer sare ah oo qiimo sare leh iyo waxyaabo aad si fudud uga heli doonin Motherboard-yada kale. Waxaa la bilaabay ku dhowaad 2020, markaa waad filan kartaa inay taageerto dad badan
2Q. Miyuu yahay Motherboard-ka Z390 Mustaqbalka-Cadayn?
Sanadaha:Haddii aad maal gashato aaladda loo yaqaan 'Z390 motherboard', waxay sii jiri kartaa illaa iyo shan sano iyada oo aan wax qabad la'aan la qaban. Waxay la socon doontaa inta badan shuruudaha waxqabadka. Si kastaba ha noqotee, uma dhigmi doonto ku darista ugu dambeysay ee liiska oo leh tusaalooyin heer sare ah iyo qaabeyn.
3Q. Z390 ma yahay Motherboard-ka Ciyaaraha Wanaagsan?
Sanadaha:Boodhadhka 'Z390 motherboard' wuxuu ku yimaadaa noocyo kala duwan, oo ay ku jiraan xad-dhaaf, taageerida taageeryaasha, iyo ikhtiyaarro badan oo isku xirnaanta ah oo ah xulasho wanaagsan oo loo yaqaan 'PC'. Maheli doontid farqi badan, oo haddii aad taqaanid sida saxda ah ee aad ula jaanqaadi karto, way ka sarreyn kartaa kumbuyuutarro badan oo dhammaadka ciyaarta ciyaaraya ama u dhigma.
4Q. Yay tahay inuu tixgeliyo Z390?
Sanadaha:Haddii aad tahay isticmaale Intel daacad u ah oo kaliya ku kalsoon processor-kan, Z390 waa xulasho weyn. Suuqa waxaa ku jira AMD Ryzen iyo processor-rayaal kale. Si kastaba ha noqotee, dadka qaarkood way diidan yihiin inay tijaabiyaan maaddaama ay leeyihiin wax ka badan shuruudaha ciyaaraha. Iyaga, Z390 ayaa ugu fiican fasalka-xirfadeed iyo adeegsi shaqsi ah maadaama aad isticmaali karto 8thiyo 9thgen Intel processor-ka si hufan.
Had iyo jeer iska hubi inaad tixgeliso qaybaha kale iyo shuruudaha maalgashiga ka hor intaadan iibsan Motherboard-ka. Liistadu waxay haysaa heerarka gelitaanka, dhexdhexaadka, iyo adeegsadayaasha dhammaadka sarreeya iyadoo la tixgelinayo iyadoo lagu barayo adigaugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Z390 motherboards'.Waxaan rajeyneynaa, mid kasta oo ka mid ah kuwan inuu caddeeyo inuu yahay wax soo kordhay oo qiimo leh. Haddii aad wax wareer ah qabto, waxaa laga yaabaa in hagaha iibsadaha iyo Su'aalaha la Weydiisto ay kaa caawin doonaan inaad si fiican u fahamto Motherboard-yadaas.
Liiskani wuxuu leeyahay xulashooyin kaa caawinaya inaad la socotid taariikhda oo aad ka yaraato xulashooyinka kale ee aan tirada lahayn. Waxaad helaysaa heerarka waxqabadka ugu wanaagsan. Marka, ka hel xulashooyinka ugu wanaagsan noocyada ugu sarreeya illaa noocyo caan ah, xitaa kuwa shaqada qabta.
Waxaad sidoo kale jeclaan kartaa:
Ciyaaraha Isboortiga ee ugu Fiican
15 Ciyaaraha ugu Fiican sida Roblox
Sidee Loo Helaa Qiime Dhimista Amazon Prime Student?
NordVPN Netflix - Hadda Ka Daaw Dibadda Mareykanka oo Fudud!
Nintendo Switch vs Switch Lite - Keebaa Mudan?
VPN ugu fiican ee loogu talagalay FireStick (2020) - Super Fast & Secured
AliExpress sharci ma yahay? Dib u eegis faahfaahsan
Emulator emulator ugufiican PC (2020)
Sidee loo Caawiyaa Windows 10?
Dib-u-eegista Swagbucks (2020) - Ma Sharci baa mise Khayaano?
Sidee loo Helaa Xeerarka Xbox ee Bilaashka ah?
Kuullada Lacag Bixinta Ugu Fiican (2020) - Android & iPhone
Xogta Whatsapp & Xaqiiqooyinka (2020)
Sida loo Beddelaan MOV in MP4
netflix t mobiil soo gal
websites movie online lacag la'aan ah oo aan duuban ama kor u saxiixay
movies in ay yihiin lacag la'aan ah si aad u daawato
daawadaan filimo cusub online lacag la'aan ah 2017
websites soo bixi shows tv free